Bandhiga Carwada Buugaagta oo maanta ka furmaya magaalada Muqdisho – STAR FM SOMALIA
Bandhiga Carwada Buugaagta oo maanta ka furmaya magaalada Muqdisho
Waxaa maanta magaalada Muqdisho ka furmaya Bandhiga Carwada Buugaagta, kaasoo ah sanadkii labaad, iyadoo lagu soo bandhigi doono buugaag ay qoreen qorayaal Soomaali iyo Ajaaniib.
Bandhigan oo ah sanadkii labaad ayaa ka duwanaan doona bandhigii hore, iyadoo buugaagta la qoray uu ku jiro buuga The Mayor of Mogadishu oo uu qoray Wariyihii hore ee BBC-da Andrew Harding.
Maxamed Diini oo ah Madaxa Carwada Buugaagta Muqdisho oo la hadlayay laanta afsoomaaliga ee BBC-da ayaa sheegay in sanadkan uu yahay kii labaad, ayna rajeynayaan inuu nabad ugu bilowdo.
Waxaa uu sheegay in Bandhiga carwada buugaagta lagu soo bandhigi cilmi iyo aqoon, isagoo xusay in qeyb ka mid ah ay siiyeen doodo ku saabsan suugaanta, dhaqanka iyo qoyska.
Maxamed Diini ayaa sheegay qorayaasha lagu casuumay bandhiga carwadan ay ka kala yimaadeen caalamka daafihiisa, isagoo tilmaamay in bandhigan oo socon doona saddex maalmood ay ku jiraan wajiyo cusub oo ah dhalinyaro isugu jira rag iyo dumar oo qorayaal ah.
Sidoo kale waxaa uu sheegay in 30% ay qorayaasha yihiin dumar, taasoo uu xusay inay tahay tallaabo wanaagsan in dumarka ka dhex muuqan doona qorayaasha Soomaaliyeed.
Waa sanadkii labaad oo la qaban doono Bandhiga Carwada Buugaagta Muqdisho, iyadoo sanadkii hore uu ahaa kii u horeeyay ee la qabto tan iyo bur burkii dowladdii dhexe.
Shirka Ganacsiga Soomaaliya iyo Masar oo ka furmay Muqdisho
9 Askari ka tirsan AMISOM oo Xabsi lagu xukumay, kadib markii lagu helay xatooyo